Mate 20 Pro သည် EMUI 9.0.0.126 ကိုလက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြသည် Androidsis
မကြာသေးမီကပစ်လွှတ်ပြီးနောက် အသစ် Huawei Mate 20သောအရာ၌တည်ရှိ၏ 20 Pro ကိုမိတ် (သူ့ကြည့်ပါ ပြန်လည်သုံးသပ်)တရုတ်ကုမ္ပဏီသည်ဤဆိပ်ကမ်းအသစ်များကိုစျေးကွက်ရှာဖွေရေးလှုပ်ရှားမှုများမှတစ်ဆင့်အလွန်တက်ကြွစွာလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်၊ သို့သော်၎င်းဖော်ပြခဲ့သည့်ဤကိရိယာ၏တိုးတက်မှုအတွက်လည်းဖြစ်သည်။ အများအပြားတိုးတက်မှုနှင့်အတူ update ကိုလက်ခံရရှိသည်.
အစီရင်ခံစာများအရ၎င်းသည်ယူကေနှင့်တောင်အာဖရိကတို့တွင်ဖြန့်ချိမှုစတင်ခဲ့သည်။ အကယ်၍ သင်က Mate 20 Pro ကိုပိုင်ဆိုင်ပြီးပြီဆိုရင်၊ သင်ဟာရက်ပိုင်း (သို့) နာရီပိုင်းအတွင်းမှာပဲသင်လက်ခံရရှိလိမ့်မယ်။ သေချာသည်မှာသင်၌၎င်းရှိခြင်းအဆုံးသတ်လိမ့်မည်။ ထို့နောက် ဤအချက်အလက်များ၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုကျွန်ုပ်တို့အားပြောပြပြီးမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုရှင်းပြပါသည်. အပေါ် Read!
ဒီ update မှာတချို့ရှိပါတယ် သင်၏ကင်မရာ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုတိုးတက်စေသောအင်္ဂါရပ်အသစ်များ။ ထို့အပြင်၎င်းသည်အောက်တိုဘာလလုံခြုံရေး patch အသစ်နှင့်အတူပါရှိပြီးအလေးချိန်မှာ 491MB ရှိသည်။ အထူးသဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် 9.0.0.126 ၌ EMUI ဗားရှင်းအကြောင်းပြောနေကြသည်။
တရားဝင် changelog အရ Mate 20 Pro ကင်မရာအတွက်စစ်ထုတ်မှုများနှင့်သက်ရောက်မှုများကိုပိုမိုဆောင်ယူလာသည်။ အထူးသဖြင့်၎င်းတို့တွင် AI အရောင်၊ ပိုကောင်းသော Zoom၊ နောက်ခံအပြာနှင့်ဖုန်း၏ဗီဒီယိုကင်မရာအတွက်အခြားရွေးချယ်စရာများထည့်သွင်းထားသည်။
Huawei Mate 9.0.0.126 Pro တွင် EMUI 20 ကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်နည်း
အဲဒါကိုဖော်ပြရကျိုးနပ်ပါတယ် ၎င်းသည် OTA update ဖြစ်ပြီးသင်၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုဖျက်ပစ်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ လက်ရှိတွင်ဤပုံစံကိုအသုံးပြုသူများစွာမရှိပါ။ ယူနစ်အားလုံးကိုရောက်ရှိရန်အချိန်အနည်းငယ်ကြာနိုင်သည်။
၎င်းကိုထည့်သွင်းရန် ဦး စွာဖုန်း၌ရှိပြီးသားဟုတ်မဟုတ်စစ်ဆေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့သင်သွားရမယ် configuration ကို > ကိရိယာအကြောင်း > စနစ်မွမ်းမံမှု။ အကယ်၍ ၎င်းကိုရရှိနိုင်လျှင် download and installation လုပ်ငန်းစဉ်ကိုစတင်ရန်လိုအပ်သည်။ ပြသနာများကိုရှောင်ရှားရန်နှင့်အော်ပရေတာ၏အချက်အလက်စာရွက်ကိုမစားမိစေရန်ကိရိယာကိုအပြည့်အဝအားသွင်းပြီးဝိုင်ဖိုင်ကွန်ယက်တစ်ခုသို့ချိတ်ဆက်ထားရန်ကျွန်ုပ်တို့အထူးအကြံပြုလိုပါသည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » Mate 20 Pro သည် EMUI 9.0.0.126 ကိုတိုးတက်မှုများစွာဖြင့်လက်ခံရရှိသည်။ ၎င်းကိုမည်သို့တပ်ဆင်ရမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့ရှင်းပြထားသည်